Mid ka Mida Musharixiinta Hirshabelle oo ay Beeshiisu codsatay inaan la dooraan, Sababta,? – Hornafrik Media Network
Kulan ay ku yeesheen Magaalada Muqdisho Odayaal Waxgarad Aqoonyahno ka soo jeeda Jufada Cabdalle, Reer Xuseen Maxamed Ee Beesha Xawaadle oo uu ka dhashay Musharax Cabdinaasir Xaaji Shirwac ayeey si wadajir ah isugu raaceen in aanay Taageersanayn Musharxnimada Cabdinaasir Xaaji Shirwac oo u tartamaya Xilka Madaxnimo ee Maamulka Hirshabelle.
Ka qaybgalayaasha kulankaasi ayaa uga digay Xildhibaanada Hirshabelle inay codkooda siiyaan Cabdinaasir Xaaji Shirwac, iyagoo sabab uga dhigay in uu yahay nin aan lagu Kalsoonaan karin, waxna aanu u qaban karin Dadka Hirshabelle, iyagoona ku eedeeyay Musuqmaasuq, Iska Horkeen Qabiil, iyo inuu ku xiran yahay Itoobiya, inkastoo aysan soo bandhigin Cadaymo la xiriira Eedaymahooda, balse waxay ku doodeen inay hayaan Cadaymo la xiriira Eedayntooda.
Abuukar Beeldaaje oo ka mid ah Odayaasha Beesha Cabdalle oo kulanka kadib la hadlay HornAfrik ayaa sheegay in Cabdinaasir Xaaji Shirwac uusan u qalmin inuu noqdo Madaxweynaha Hirshabelle, isagoo ka codsaday Xildhibaanadda Codaynaya inay Doortaan Musharixii kale ee ay u arkaan inuu samatabixin karo Deegaanadda Hirshabelle.
Musharax C/naasir Xaaji Shirwac oo ka mid ahaa Xildhibaanadii Baarlamaankii lagu soo dhisay Tuuladda Carta ee Jabuuti, laakiin kadib Dowladaasi aan ka soo muuqan Siyaasadda ayeey Nabadoonada Beeshiisu ku dhaliileen in waqtigii uu ahaa Xildhibaanka inuusan waxba u qaban Deegaanadii uu matalayay, haddana aysan uga fadhin inuu wax u qabto Bulshadda Hirshabelle.
Kulankan ay yeesheen Beesha uu ka soo jeedo Musharax Cabdinaasir Xaaji Shirwac ayaa caqabad ku noqon kara Tartanka uu ugu jiro Madaxnimada Hirshabelle, iyadoo Maalamaha soo socda la qaban doono Doorashada Madaxweynaha Hirshabelle sida la qorsheeyey.
Musharax C/naasir Shirwac ayaan ka hadlin illaa iyo hadda Eedaynta loo jeediyay.
Dhawaan ayey ahayd markii Cali Cabdullaahi Cosoble oo ahaa Madaxweynaha Hirshabelle ay Kalsoonidii kala noqdeen Xildhibaanada Baarlamaanka Hirshabelle, inkastoo uu weli ku adkaysanayo inuu yahay Madaxweynaha Sharciga ah ee Hirshabelle, isagoo ku eedeeyey Xukuumada Khayre inay soo abaabushay Shirqoolka Siyaasadeed ee lagu afgambiyay.